मुटु रोग के हो ? कसरी बच्न सकिन्छ ?::mirmireonline.com
मुटु रोग के हो ? कसरी बच्न सकिन्छ ?
मुटु रोग के हो ?
मानव शरीरका अङ्गहरुमध्ये मुटु जटिल प्राकृतिक अङ्ग हो । यो हरपल चलिरहन्छ । छातीभित्र धडकिरहने यो सानो अङ्गले शिरदेखि पैतालासम्म महत्वपूर्ण प्रभाव पारेको हुन्छ ।
नियमित रूपमा आफ्नो ब्लडप्रेसर नापी राख्नुस्! रगतमा ग्लुकोजको मात्रा बढ्नु हृदयघात हुने सक्ने सम्भावना बढ्नु हो ; त्यसैले यदि तपाईलाई मधुमेह (डाइबिटिज) छ भने आफ्नो रगतको ग्लुकोजको मात्रा नियन्त्रण गर्नु एकदमै आवश्यकता पर्दछ। त्यसै गरी रगतमा हुने कोलेस्ट्रोलको मात्रा बढ्नु पनि मुटुको लागि घातक हुन्छ। स्वस्थ खाना, शारीरिक व्यायाम र आवश्यक परेमा औषधीको सेवन गरेर पनि कोलेस्ट्रोलको नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। बेलाबेलामा रगतमा कोलेस्टेरोलको मात्रा र मुटुको E.C.G गराउनुपर्छ l